सिमा विवादसँगै पटाक्षेप भएका रहस्यमय पाटाहरु - eNepal
Nepal Public Voice
by enepal May 23, 2020 063
पाण्डवहरूले आफ्नो प्रतिज्ञा अनुसार वनवास र गुप्तवास पूरा गरेर कौरवहरूसँग आफ्नो राज्य मागे तर कौरवले पाण्डवलाई राज्य दिएनन् । कौरवहरू पाण्डवलाई राज्य फिर्ता नगरेका कारण कुरुक्षेत्रमा कौरव पाण्डवको युद्ध भयो । यो युद्ध १८ दिनसम्म चलेको थियो । महाभारतको युद्धपश्चात् भिम र अर्जुनको विवाद भयो । प्रत्येकले युद्धमा धेरै योद्धाहरू आफूले मारेको भनेर घमण्ड गर्न थाले । यो देखेर कृष्णले ती दुबैलाई युद्धको सबै विवरण देखेको एउटा टाउको भएको ठाउँमा लिएर गए । त्यो टाउको बर्बरीकको थियो ।
महाभारतको युद्ध हुने कुरा सुनेर बर्बरीक आफूसँग भएका तीनवटा बाण लिएर जसको सेना कम छ त्यतैतर्फ सहयोग गर्ने भनेर आएका थिए । यो कुरा चाल पाएर ब्राह्मण भेषमा आएका कृष्णले बर्बरीकलाई तपाईंसँग तीनवटा मात्र बाण छन् कसरी लड्नुहुन्छ भनेर सोधे । यो सुनेर बर्बरीकले भने- “म एक्लैले करोडौं योद्धाहरू मार्न सक्छु । मेरो पहिलो बाण छोडेपछि त्यो बाणले मान्छेको मरण जहाँ छ त्यहाँ चिन्ह लगाएर फर्कन्छ । मेरो निसाना अचुक छ । अर्को बाण छोडेपछि त्यो मान्छेलाई मारेर फर्कन्छ ।” कृष्णले बर्बरीकको परिक्षा लिए । बर्बरीकले साँचो कुरा भनेको थाहा पाएर ब्राह्मणरुपी कृष्णले बर्बरीकको टाउको मागे । किनभने यदि बर्बरीक त्यो युद्धमा लड्न थाले भने उनलाई कसैले पनि जित्न सक्दैनथ्यो र सबैलाई उनले मार्ने थिए । यो सुनेर बर्बरीकले आफूलाई महाभारतको युद्ध हेर्ने इच्छा भएको बताए । तब कृष्णले महाभारतको युद्धकालसम्म बर्बरीकको टाउको जिवित रहने बरदान सहित उनको टाउको काटेर एउटा अग्लो रुखमा राखेका थिए ।
महाभारत युद्धको विवरण सुनाउन कृष्णले पाण्डवहरूलाई त्यही टाउको भएको ठाउँमा लिएर गएका थिए । त्यो टाउकोसँग पाण्डवहरूले युद्धमा कसले धेरै मान्छेलाई मारेर जित्यो भनेर सोधे । यो सुनेर बर्बरीकको टाउकोले भन्यो- “अरुले त केटाकेटीको खेल झैं गर्थे । यो युद्धका जति पनि ठुला वीरहरू थिए ती सबैलाई कृष्णले मार्थे भने द्रौपदीले तिनको रगत पिउने काम गर्थिन् ।” यो सुनेर भीमसेन र अर्जुनको घमण्ड शान्त भयो ।
सिमा विवाद चर्किदै गर्दा नेपालको राजनीतिमा भारतीय ग्र्याण्ड डिजाइनको पटाक्षेप हुँदैछ । जेएनयुको किल्ला प्रयोग गरेर भारतका शासकले हजारौँ नेपाली मारेका क्रुर दृश्य पटाक्षेप हुँदैछ । यसरी नै मदन भण्डारी, राजा वीरेन्द्रहरुको अन्त्यको अन्तर्कथाका पाटा पनि नाटकका अन्य दृश्यमा पर्दा हट्दै जाँदा देखिँदै जानेछन् ।
लेखक डिकेन्द्र ढकाल
युनिक पोईटको “काम गर्न थाल मुला” (भिडीयो)
कविता: हाम्रा प्रम भन्दैछन …… नाई मलाई थाहा छैन
आखिर के भएको थियो इन्दिरा जोशीलाई
enepal July 2, 2017 July 2, 2017
enepal May 31, 2018
८० लाख डलर पारिश्रमिक ठग्ने मास्टर सेफका निर्णायक जर्ज कार्यक्रमबाट बाहिरिए
enepal July 24, 2019
रुकुम हत्याकाण्ड, बाहुनवाद, झोवा विक र ‘नव सामन्तवाद’ !
आज थप१७० जना सहित कोरोना संक्रमित संख्या १२१२ पुग्यो
कोरोना ले अर्घाखाँची मा थप एक जना को मृत्यु, संख्या ६ पुग्यो
कोरोनाको महामारीको बिच देशले गुमाएका एक सिपाई:-
अष्ट्रेलिया बाट नेपाल फर्कन चाहानेले खर्च आफै ब्यहोर्नुपर्ने
Governor of Koike, Tokyo “From the beginning of the week,“ Step2”” New Corona:-
“मेरो देश” लिएर आए मेल्बोर्नका दीपक सापकोटा र माधव न्यौपाने
पर्यटन ब्यबसाय उकास्न ५० अर्ब को कोष
बुन्डोस लिगा फुटबल मा जित्ने मौका गुमायो लिपजिगले
काठमाडौ लगायत देशै भर आज बिहान देखि भीषण बर्षा
के उधमी ले पाँच प्रतिशत ब्याज मा कर्जा पाउलान् ?
स्पेनका पाका फुटबल खेलाडी अरिट्ज अडुरिजले सन्यास को घोषणा
सिमा बिबाद कारण मोदि को मुड ठिक ठाउँ नभएको डोनाल्ड ट्र्म्प प्रतिक्रिया
नेप्लिज विजनेस एसोसियसन अफ भिक्टोरीयाले बिधार्थीहरुलाई खाना उपलब्ध गराउँदै
बजेट को आकार ,चालू खर्च ,बिकास खर्च, कर छुट र कुन क्षेत्रमा कति बजेट बिनियोजन
आगामी बजेट ले मुख्यत सम्बोधन गरेका कार्यक्रम
बजेट १४खर्ब ७४अर्ब ६४ करोड ,बजेट को आकार घट्यो
पौडि खेल्नेक्रममा १ नेपाली बिधार्थिको ज्यान गयो:-
निकै चर्चामा आएको संसद बिकास कोष ६करोड बाट ४ करोड झर्यो
सुरक्षा कर्मिको पोसाक ,जुता ,खाद्यान्न अब नेपालमै उत्पादन गर्ने
निष्पक्ष समाचार, विचार र विष्लेषण
enepal © 2019. All Right Reserved. Designed and Developed by Ujjwal Khanal